Programme rindrambaiko maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Distros GNU / Linux an'ny 2020 | Avy amin'ny Linux
Amin'ny hozatry ny be mpampiasa na «programa tsara indrindra » mandritra ny taona 2019, anio dia hanolotra fanangonana kely nefa mahasoa ny «programa tsara indrindra » de «Software Libre» ho an'ny «Distros GNU/Linux» do «año 2020». Mba hivoahana afovoany kely dia niely arakaraka ny fandehan'ny fotoana momba ireo lohahevitra ireo lahatsoratra, izany hoe ny «programa tsara indrindra» amin'ny faritra na sokajy.
Ny fanangonana izay antenainay fa ho lasa lisitra ara-drariny sy voalanjalanja, mitana ny laharana ary voafaritra tsara amin'ny «programa tsara indrindra », izay mamela ny fandrakofana avy amin'ireo nentim-paharazana, tena ilaina ary fototra, izay mazàna tsotra sy ampiasaina amin'ny ankapobeny ho an'ny rehetra, indrindra ny «usuarios inexpertos, novatos y principiantes», na dia ny sasany amin'ireo izay tena maoderina, manan-danja ary tena miavaka amin'ny fampiasana azy, ho an'ny besinimaro mandrafitra «usuarios más avanzados, específicos o técnicos».
Amin'ity fanangonana ity dia azo antoka fa hahita programa marobe izay, manokana, ny sasany amintsika dia mihevitra ny «mejores programas» de «Software Libre» y «Código Abierto», samy ao amin'ny «Distros GNU/Linux» toy ny amin'ny hafa «Sistemas Operativos»toy «Windows» ary ao «MacOS», amin'ny maha-multiplatform azy. Ary angamba, ny hafa izay tsy heverintsika ho toy izany na mendrika ny ho ao anatin'io lisitra io.
Na izany aza, ny hevitra dia izany amin'ny faran'ny fanangonana na famakiana lisitra, afaka mandalo hevitra sy tolo-kevitra rehetra, manavao hatrany mba hamoronana a lisitry ny rehetra manerantany sy ankehitriny «mejores programas» ho an'ny hoavintsika «Distros GNU/Linux» amin'ny herintaona.
Tsy maninona izany, raha a «usuario inexperto, novato y principiante» na raha ianao a «usuario avanzado, específico de un área o técnico»Ny tolo-kevitra naroso rehetra dia manan-danja ary ho zava-dehibe ny fanombanana mba hampidirina ao anaty fanangonana raha ilaina izany. Mazava ho azy, raha tsy misy azy io dia mihasimba ho lasa tsy manam-petra fanangonana ny fampiharana izay manao toy izany koa. Noho izany, ny hevitra dia tsy misy mihoatra ny 3 ny fampiharana mitovy amin'ny sokajy tsirairay.
1 Antontan'isa statistika manan-danja
2 Rindrambaiko maimaim-poana sy programa open source tsara indrindra
2.1 Folo ambony amin'ireo fandaharana maimaim-poana sy misokatra tsara indrindra
2.2 Fandaharana lehibe malalaka sy misokatra lehibe hafa
2.2.1 Mpijery tranonkala
2.2.2 Fitaovana fifandraisana sy hafatra
2.2.3 Fitaovana fanabeazana
2.2.4 Fitaovana ankapobeny
2.2.5 Automatique birao
2.2.6 Fitaovana multimedia
2.2.7 Fitaovana ara-teknika
2.2.8 Utilities amin'ny serivisy amin'ny Internet
2.2.9 Fampiasana serivisy, fialamboly ary fialamboly
2.3 Fandaharana lehibe tsy manan-danja sy tsy misokatra ary fandaharana misokatra lehibe hafa
2.4 Tranonkala malalaka sy misokatra tsara indrindra
2.4.1 Social Networks
Antontan'isa statistika manan-danja
Alohan'ny hanolorany ny lisitra dia te-hanasongadina eo imason'ny mpangataka izahay na tsia, momba ny «Software Libre» y «GNU/Linux»Manao ahoana ry zareo mandra-pahatongan'ny taona 2019. Ireto misy angon-drakitra manan-danja manaraka handinihana, hanasongadinana ary hampielezana, nangonin'ilay tranonkala antsoina Tribunal fampiantranoana:
100% amin'ireo solosaina finday eto amin'izao tontolo izao no mandeha amin'ny Linux.
Amin'ireo tranonkala 25 ambony eto an-tany dia roa ihany no tsy mampiasa Linux.
96,3% amin'ireo mpizara 1 tapitrisa manerantany no mitantana Linux.
90% amin'ireo fotodrafitrasa rahona rehetra mihazakazaka amin'ny Linux ary saika ny mpampiasa rahona tsara indrindra rehetra no mampiasa azy.
54,1% amin'ireo mpandraharaha matihanina no nampiasa ny Linux ho sehatry ny asany.
Ny 83,1% amin'ireo mpamorona matihanina dia aleony miasa amin'ny Linux ho toy ny sehatry ny asa.
Rindrambaiko maimaim-poana sy programa open source tsara indrindra
Folo ambony amin'ireo fandaharana maimaim-poana sy misokatra tsara indrindra
Fandaharana lehibe malalaka sy misokatra lehibe hafa
Fitaovana fifandraisana sy hafatra
Globe Virtual marbra
Mpanoratra horonantsary tsotra
Utilities amin'ny serivisy amin'ny Internet
Fampiasana serivisy, fialamboly ary fialamboly
Fandaharana lehibe tsy manan-danja sy tsy misokatra ary fandaharana misokatra lehibe hafa
Tranonkala malalaka sy misokatra tsara indrindra
Fikambanana Kernel (https://www.kernel.org/)
Fikambanana Linux (https://www.linux.org/)
Manantena izahay fa kely izany, amin'izao fotoana izao, mitombo miaraka ny ny fandraisan'anjaran'ny mpamaky bilaogy rehetra ka lasa loharano mety indrindra ho an'ny iray manontolo «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» izay mamaky antsika. Noho izany, tsarovy amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitrao mba hamoahana ny soso-kevitrao, hanombatombanana azy ireo ary ampidiro raha izany no izy, mba hiteraka lisitr'ireo «mejores programas» ho an'ny hoavintsika «Distros GNU/Linux» amin'ny herintaona, 2020.
Raha toa ka te hahafantatra misimisy kokoa momba ireo rindranasa atolotra eto ianao, dia azonao atao ny mikaroka ilay tranonkala Linux-Apps , antsipiriany misimisy kokoa momba ny tsirairay amin'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Programme rindrambaiko maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Distros GNU / Linux an'ny taona 2020
Toa tsara amiko. Mifamadika amin'ny Linux aho. Manana teknisianina IT hametraka distro ho ahy aho.
Valiny tamin'i Juan Pérez
Miarahaba anao Juan! Tsara, antenaiko fa hahafinaritra sy mahomby ny traikefanao GNU / Linux.
Half-Live: Alyx dia efa manana daty amin'ny fiverenan'ny lalao video an'i Valve nandrasana hatry ny ela
Ny Kandidà famotsorana voalohany an'ny Darktable 3.0 dia efa navotsotra